Akụkọ - Na-alụ ọgụ megide ọrịa ahụ ọnụ
N’uhuruchi Ememe Oge opupu ihe ubi nke China, COVID-19 gbasara n’ụzọ ike. Ọrịa dị otú ahụ nke metụtara onye ọ bụla akpatawo ihe dị egwu nye ọtụtụ nde mmadụ.
Kemgbe ntiwapụ ahụ, Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd. na-eme mgbalị niile iji mepụta ma nyekwa ihe nkpuchi, ọgwụ disin na ihe ndị ọzọ. Limeng Pharmaceutical nyekwara ihe karịrị 5 nde yuan ịbawanye ụlọ ọrụ nlekọta ahụike na igwe nkpuchi 5.
Na February 25th, Enhao Liu, onye isi oche nke Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd. nyefere ihe disinfection na ihe nkpuchi nye ụlọ ọrụ asaa gụnyere ụlọ mkpọrọ na Shandong Province. N'ime ha, a ga-ezipu otu narị gbọmgbọm nke ọgwụ disinfectation 84 na otu karama 1,000 nyere onyinye n'ụlọ ọgwụ site na ụlọ ọgwụ na Wuhan maka mgbochi na njikwa ọnọdụ ọrịa na Wuhan. Onu ogugu 5,600 nke 84 disinfectant na 1,200 barel nke 84 disinfect nyere onyinye oge a. Mpempe akwụkwọ nlekọta ọ bụla na-egosi ọrụ mmekọrịta nke ụlọ ọrụ Limeng Pharmaceutical, na n'oge a pụrụ iche, a na-eme ihe ndị dị mkpa iji kwado ọrụ mgbochi ọrịa na njikwa ọrụ.
Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd. anọwo na-eme nnyocha, mmepe, mmepụta na ire nke ọgwụ ndị China maka afọ 26, wee depụta ya dị ka ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na Jinan, ngalaba dị elu nwere onyinye pụtara ìhè na nlekọta ahụike. ụlọ ọrụ na Shandong Province, a na-eduga enterprise na ọchịchị larịị na Jinan successively. E wezụga nke ahụ, akara akara akara Limeng dị ka akara ụghalaahịa ama ama na Jinan. Limon Pharmaceutical ga-agbaso usoro ihe ọmụma azụmahịa nke "onye ahịa mbụ, gbasaa n'ihu", wepụta onwe ya ịbụ onye ọsụ ụzọ nke nri siri ike, wee nye onyinye maka iwu "Healthy Limon na China Healthy".
Site na mbọ niile a na-agba ịlụso ọrịa a ọgụ, anyị na-eme ihe. Limon Pharmaceutical Co., Ltd. butere ụzọ ịmalite ibu ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma jiri aka ya buru ụzọ na-ebuso ọrịa ahụ agha. Ọ gbakọtara na ndị obodo niile iji merie nsogbu ahụ, ma nye onyinye iji merie ọgụ ahụ megide COVID-19.